ကြွက်အမဲတွေပြေးရန် မှော်ဆရာရဲ့ ဆေးနည်း (အာမခံ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြွက်အမဲတွေပြေးရန် မှော်ဆရာရဲ့ ဆေးနည်း (အာမခံ)
ကြွက်အမဲတွေပြေးရန် မှော်ဆရာရဲ့ ဆေးနည်း (အာမခံ)
Posted by မှော်ဆရာ on Aug 31, 2011 in Copy/Paste | 14 comments
ဟိုတစ်လောက မှော်ဆရာဆီ မိန်းကလေးတစ်ယောက် တစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်…မှော်ဆရာကလဲ ကဝေပျိုနဲ့ ဂစ်တာကိစ္စ လောလောလတ်လတ် ရှိသေးတော့ ချက်ချင်းထွက်မတွေ့ရဲသေးပါဘူး…နောက် သရဲမဟုတ်တာ သေချာတော့မှ ထွက်တွေ့တော့ ကျွန်မ မှော်ဆ၇ာ့ဆီ အကူအညီ တစ်ခုလာတောင်းတာပါတဲ့.။ကျွန်မအိမ်မှာ ကြွက်မဲတွေ သောင်းကျန်းနေတယ်ဆရာ..ရွာထဲကသူတွေက မြွေမွေးဆိုတာတော့ မမွေးရဲဘူးတဲ့ အိပ်နေတုန်း ဟိုကြား ဒိကြားဝင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲဆရာတဲ့ ။(သေတ္တာကြား ၊ စောင် ခြင်ထောင်ကြား ပြောတာထင်ပါတယ်နော်….)ကြောင်မွေးဖို့ဆိုတာလဲ ကြောင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့တင် တော်တော် စိတ်ညစ်ရပါတယ်တဲ့…အရင်တုန်းကတော့ ကြောင်ကြီးနဲ့ တူတူ အိပ်ပါသေးတယ်တဲ့၊ ဒါပေမယ့် ကြောင်ကြီးဆိုတာ ဒီလိုပဲ ပွတ်သီးပွတ်သတ် လာလာလုပ်ပြီး ထွက်ပြေးသလားတဲ့ အဲဒီတော့ ကြောင်ကြီးဆိုရင် မချစ်ချင်တော့ပါဘူးတဲ့ .အဲဒီတော့ ကြွက်ပြေးအောင် ဆရာတစ်ခုခုလုပ်ပါဦးလို့ ကြောင်ကြောက်သူ အဲဒိ့မဒီက ဆိုပါတယ်…
ဒါကြောင့် သူ့အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ဆော်လမွန် ဘုရင်ကြီးရဲ့ လျှို့ဝှက်ကျမ်းစာကို ထုတ်နှုတ် လေ့လာကြည့်တော့ သူနဲ့ ကိုက်မှာ တစ်ခု သွားတွေ့ပါတယ်..
ကြွက်မဲတွေပြေးစေချင်ရင် ကြွက်ဖြူမွေးပါ (အာမခံနည်း)တဲ့
ဒီအတိုင်း သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ သူလဲ ကြောင်ကြိးထက်စာရင် ကြွက်ဖြူပဲ ချစ်တော့မယ်ဆိုပြီး ကြွက်ဖြူလေးနှစ်ကောင် ရှာဖွေပြီး ၀မ်းသာအားရ ပြန်သွားပါတယ်….
နောက်နှစ်လလောက်ကြာတော့ သူပြန်လာပါတယ်.ဆရာ ကျွန်မအိမ်မှာ ကြွက်မဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ လိုက်ကြည့်ပါဆိုလို့ ကျွန်တော်လဲ ငါ့နည်းလမ်းအလုပ်ဖြစ်ပြိ ဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရ လိုက်ကြည့်တော့ တကယ်ပါပဲ ကြွက်မဲတွေ တစ်ကောင်မှ မရှိတော့ပါ…
ဒါပေမယ့် ကြွက်မဲနဲ့ ကြွက်ဖြူတွေရဲ့ ချစ်ခင်ခြင်းအမှတ်သင်္ကေတ ကြွက်ပျောက်ကြားလေးတွေကတော့ နေရာအနှံ့ပါ။ အဲဒီ့ကြွက်ကလေးတွေက ကြွက်မဲတွေထက်တောင် ပိုကြီးနေပါသေးတယ်.၊ ကြွက်ဖြူလေးတွေက လူကို မကြောက်တတ်တော့ ကြွက်ပြောက်ကြားလေးတွေကလဲ လူကို ရှိတယ်လို့တောင် မမှတ်တော့ပါ.။ကြွက်မဲတွေကတော့ သူတို့ထက်အကောင်ကြီးတဲ့ ကြွက်ပြောက်ကြားတွေကို ကြောက်ကြတော့ ပြောင်းပြေးကြကုန်ပါပြီ။
စာအုပ်စင်မှာလဲ ကြွက်ပြောက်ကြားတွေ ၊ အိပ်ယာမှာလဲ ကြွက်ပြောက်ကြားတွေ ၊ မီးဖိုချောင်မှာလဲ ကြွက်ပြောက်ကြားတွေ ၊ နေရာတကာ ကြွက်ပြောက်ကြားတွေပဲ မင်းမူနေပါတော့တယ်…
ဒါကြောင့် ကြွက်မဲတွေ ပြေးစေချင်ရင် ကြွက်ဖြူမွေးပါ…ကြွက်မဲတွေ တစ်ကောင်မှ မရှိစေရပါဘူး အာမခံပါတယ် .
ဒါပေမယ့် ကြွက်ပြောက်ကြားတွေကိစ္စတော့ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်ရှင်းကြပါ…
မှော်ဆရာ နှာစေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ ….
ကောင်းလိုက်တဲ့ဆေးနည်း ကြွက်သားစပ်နည်းလို့ပြောင်းရမယ် ။ ကြွက်ရောင်စပ်လေးတွေ လှမှာပဲနော် ။ ခ်ခ်
ဒါက ဒီလို ရှိပါတယ် ၊ စီးပွါးဖြစ် အသားတိုးစီမံကိန်း လုပ်ရရင်ကောင်းမလားလို့.၊ ပေါက်ဆီလုပ်စားမယ်လေ၊
သီးသန့်မွေးတော့ သန့်မှာပါ၊ ကြက်သား အစားထုိုးပေါ့…။
ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်လို မှော်ဆရာလည်း နှာစေးနေပါလား
တခါတည်းကြွက်မွေးမြူရေးလုပ်ပြီး ကြွက်သားသာ ရောင်းစားပေတော့။
ကြွက်များ​​​သောင်း​​ကျန်း​​သဖြင့်​​ တရုတ်တွင် ​​ကြောင်တပ်ဖွဲ့​​ ဖွဲ့​​စည်း​​
ကြွက်တွေကိုနိမ်နင်းမဲ့ ကြောင်တပ်ဖွဲ့© dailymail
တရုတ်နိုင်ငံ၊​ ဇင်ဂျီအန်း​​ ​​ဒေသရှိ အာဏာပိုင်များ​​သည် ​​သောင်း​​ကျန်း​​​နေ​​သော ကြွက်များ​​ကို သုတ်သင်ရန်အတွက် ​​ကြောင်တပ်ဖွဲ့​​ တစ်ခုကို ဖွဲ့​​စည်း​​​နေ​​ကြောင်း​​သိရသည်။
အဆိုပါ ​​ ဒေသတွင် ကြွက်များ​​သည် ​​ကောက်ပဲသီး​​နှံများ​​နှင့်​​ စိုက်ခင်း​​ဧရိယာများ​​ကို ဖျက်ဆီး​​လျက် ရှိ​​နေကြသည်။ ထို့​​​ကြောင့်​​လည်း​​ ​​ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ​​က ဖမ်း​​ဆီး​​ရမိထား​​သည့်​​ ပိုင်ရှင်မဲ့​​​ကြောင် ၁၅၀ ခန့်​​ကို ကြွက်များ​​အား​​ သုတ်သင်​​ရေး​​အတွက် ​​လေ့​​ကျင့်​​​ပေး​​​နေခြင်း​​ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ စတင်စမ်း​​သပ်မှုများ​​အရ ​​သောင်း​​ကျန်း​​​နေ​​သော ကြွက်အ​​ရေအတွက် ​​လျော့​​နည်း​​လာ​​နေပြီဖြစ်​​ကြောင်း​​ သတင်း​​များ​​က ​​ဖော်ပြခဲ့​​သည်။ ​​ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ​​က ရိုး​​ရှင်း​​​သော ယခုနည်း​​လမ်း​​ကို အခြား​​​ဒေသများ​​တွင်ပါ သုံး​​စွဲနိုင်ရန် ​​မျှော်လင့်​​​နေ​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။ အာဏာပိုင်များ​​က ပိုင်ရှင်မဲ့​​ ​​ကြောင်များ​​ကို စနစ်တကျ ဖမ်း​​ဆီး​​ထိန်း​​သိမ်း​​မှုကို ပိုမို​​ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်​​ဆောင်ရန်လည်း​​ စဉ်း​​စား​​​နေသည်။
၎င်း ​တို့​​သည် အဆိုပါ ​​ကြောင်များ​​အတွက် အိမ်ငယ်များ​​ကို ​​ ရေနှင့်​​နီး​​​သော ​​နေရာများ​​တွင် ​​ဆောက်လုပ်ကာ ကြွက်များ​​ကို သတ်ဖြတ်​​စေရန် သင်ကြား​​​ပေး​​ခဲ့​​သည်။ တရုတ်မီဒီယာများ​​က ကြွက်များ​​သည် ​​ဆောင်း​​တွင်း​​တွင် အပူချိန် ကျဆင်း​​ လာသည့်​​အခါ လူ​​နေအိမ်များ​​ထဲတွင် ခို​​အောင်း​​​နေ​​လေ့​​ရှိ​​ကြောင်း​​လည်း​​ ​​ဖော်ပြခဲ့​​သည်။ ကြွက်များ​​​ကြောင့်​​ တရုတ်နိုင်ငံရှိ အချို့​​​ဒေသများ​​တွင် လယ်သမား​​များ​​အတွက် လုပ်ငန်း​​ ထိခိုက်မှုများ​​ ကြီး​​ကြီး​​မား​​မား​​ ဖြစ်​​ပေါ်​​စေခဲ့​​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။
I thought it is real when I saw your titles till နောက်နှစ်လလောက်ကြာတော့ သူပြန်လာပါတယ်.ဆရာ ကျွန်မအိမ်မှာ ကြွက်မဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ လိုက်ကြည့်ပါဆိုလို.
I’m fresher here , I must care. Ha Ha.
ကျွန်တော်က တော်သေးတယ် …
ကိုကြောင်ကြီးတို့ ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုတို့ဆို ပိုသတိထားပါ….
မှော်ဆရာရယ် ရွာထဲမှာ ဒေါ်အီးတုံးရဲ့ သားဆက်ခြားရေးစာတွေကို အားနာပါအုံး၊ ဟိုမှာတော့ ပညာပေးရေးလိုက်ရတာ လက်မောင်းတောင် ကြွက်သားအတော်ထွက်လာဆိုပဲ…။
နောက်တစ်ခါ ကြွက်သားဆက်ခြား ပညာပေး ဟောပြောပွဲလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်…
အဲဒီ့အခါ ဒေါ်အီးတုံးကို ဟောပြောခိုင်းမှာပါ…..
ဟယ် ကိုကြောင်ကြီးလဲ မှော်ဆရာလက်ချက်နဲ့ တူတူအိပ်လို့ ၊မမအိတုံကိုလဲ နာမည်ဖျက်နေကြပီ။နင်တို့ နော်လွန်နေပီ။
တကယ်မှတ်လို့ ၀င်ဖတ်ပါတယ် နောက်တယ်နော်။